Muhiimadda cilmu-nafsiga ee midabka fanka iyo naqshadeynta | Abuurista khadka tooska ah
Muhiimadda cilmu-nafsiga midabka ee farshaxanka iyo naqshadeynta aad ayey muhiim ugu tahay farshaxanka garaafyada iyo banaanka. Midabku waa luqad taas gudbiyaan farriimaha awood badan leh sida kuwa lagu kala qaado sawirrada iyo farta. Hal midab ayaa had iyo jeer ahaan doona la xidhiidha dareen, Saxeex micnaheedu yahay farriimaha labaad ee maareeya gudbinta dhammaan noocyada shucuurta.
Midabku wuxuu ahaa a aasaaska farshaxanka halkaas oo farshaxanno nooc kasta leh ay uga faa'iideysteen inay yihiin aasaas aasaasi ah shaqadooda, midab casaan ah ayaa ka turjumaya xamaasad halka mid buluug ah dejinayo. Midabku waa waligiisna ahaan doonaa saaxiibka weyn ee farshaxanka.
Midabada iyo shucuurtu waa cunsurro xiriir la leh Ku guuleysiga habkan wuxuu abuuraa luqad sawir leh ku xirnaano habka aan u aragno adduunka. Midab ama midab huwan wax kale ma aha Mawjad dherer ah oo maskaxdeena ay maamusho si ay u qeexdo ka dib markii lagu arkay indhaheenna, tani waa qayb uun laakiin Muxuu midab noo soo gudbiyaa? marwalba waxaan haysanay dareenkaas xasilloon marka aan daawaneyno gabbaldhac ama dareen tamar inta aan ku dhex soconeyno keymo. Xiriirka aan la leenahay midabada waa mid aad u sareeya waxayna maamushaa gudbinta dhammaan noocyada dareenka. Midabada qaar waxay naga dhigi doontaa inaan dareemo tamar iyo kuwa kale oo iska soo horjeed ah, iyadoo lagu saleynayo dhammaan xiriirkan ka dhexeeya midabka iyo shucuurta xayeysiinta iyo farshaxanka ayaa qalabkan u adeegsaday hub ahaan si uu u gaaro daawadayaasha.
Midabada waxaa lagu soo ururiyey dkooxaha waaweyn: diirimaad iyo qabow. The midabo diiran waa kuwa aan aad u aqaan waxay isu keenaan jaalle iyo dab, waa midabyo in waxay sii gudbiyaan tamar badan.
ka midabada qabow waa kuwa waxay ku soo dhowaanayaan buluugga iyo badda, midabadan xasillooni iyo xasillooni ku dhaaf.
Waa inaan taas ogaanno midabada qaarkood waxay la xiriiraan dareemo qaarkood togan laakiin waa maxay sababtu? haddaan fiirino gabbaldhaca waxaan arki doonaa midabyo liin dhanaan ah (diirran) waxay gudbiyaan dareenka degenaanshaha. Dareenka xasilloonida ee aad hesho gabbaldhac hel maskaxdeena si ay u dhisto a xiriirka ka dhexeeya xilligaas wanaagsan iyo astaamaha ugu waaweyn, kiiskan midabka. Maskaxdeenu waxay isticmaashaa xiriirka cunsurrada had iyo jeer, tusaale ahaan waxaan isku xireynaa qaabka wajiga oo leh wasakhda darbiga.
en el cine waan heli karnaa tixraacyo badan oo ku saabsan muhiimadda midabka iyo isticmaalkiisa si loogu gudbiyo dareenka. Filim waliba wuxuu leeyahay hoos midab gaar ah leh maxaa yeelay waxay kuxirantahay filimka iyo sheekadiisa, waa inuu matalaa hal shay ama mid kale. Filim ku saabsan jacaylka iyo farxadda la mid ma aha kan cabsida laga qabo, midabada ay fikradahani matalayaan ayaa is beddelaya tanina waxaa loo adeegsadaa in lagu sii gudbiyo xitaa si ka sii wanaagsan dareenka aad rabto inaad metesho.
Waxay kuxirantahay waxa aan raadineyno inaan matalno waa inaan isticmaalnaa midab ama midkale. Midabyadu waa hal luuqad oo dheeri ah oo ay tahay inaan maskaxda ku hayno dhammaan noocyada mashaariic muuqaal ah. Markaan abuureyno nooc kasta oo mashruuc garaaf ah waa inaan sameynaa bilowgaba ka ogow waxa aan raadineyno inaan matalno si ay u u turjun fariintaas qaab muuqaal ah iyada oo loo marayo isticmaalka midabka. Waa lagugula talinayaa samee diyaargarow hordhac ah nooc kasta oo mashruuc ah si wanaagsan u abaabulo dhammaan waxyaabaha ku jira mashruucan iyo inaad awood u yeelatid inaad maskaxda ku hayso noocyadan su'aalaha garaafka ah. Kahor intaadan bilaabin shaqada, ka fikir waxa midabbada aad isticmaali doontid ka dhigan yihiin.
Muxuu midabkaygu matalayaa? Maxaan rabaa inaan matalo? Midabkaygu ma la xiriiraa waxa aan raadinayo?
Matalaada shucuurta iyo fikradaha iyadoo loo marayo midab Waa shaqo waa inaan aad u taxaddarnaa maxaa yeelay midabku wuxuu saaxiib weyn u yahay matalaadda shucuurta Miyaad qiyaasi kartaa inaad aragto filim cabsi leh oo casaan leh? Waxay noqon kartaa in loo dhinto laakiin qosol ...
Lmidabada ayaa had iyo jeer lala xiriiri doonaa shucuurta sidaa darteed waa inaan marwalba hubinaa kahor in waxa aan raadineyno inaan matalno lagu gaari karo midab gaar ah. Baro sida loogu ciyaaro midabka si la mid ah sidaad ugu ciyaarto sawiro, qaabab iyo xarfaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Muhiimadda cilmu-nafsiga midabka ee farshaxanka iyo naqshadeynta